အဆိုပါအမှောင်ရွှေဖရုံသီးတစ် Glow Make
သင်တစ်ဦးဘုံ Non-အဆိပ်သင့်ဓာတုပစ္စည်းသုံးပြီး jack ကို-o-မီးအိမ်မျက်နှာနဲ့အတူအမှောင်ထဲမှာရွှေဖရုံသီးတစ်အလင်းရောင်စေနိုင်သည်။ အဆိုပါ jack ကို-o-မီးအိမ်ထွင်းထုခြင်းသို့မဟုတ်မီးမလိုအပ်ပါဘူး, မိုးရွာရွာလေ၌ထွန်းလင်းနှင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်၏အဖရုံသီးအဖြစ်ကြာရှည်ခံသည်။ Plus အား, ထိုရဲဖရုံသီးတကယ် spooky ကြည့်!
ရွှေဖရုံသီး (အစစ်အမှန်ထွင်းထု, ဒါမှမဟုတ်အတု)
အဆိုပါရွှေဖရုံသီး Glow Make
အခြေခံအားဖြင့်, သင်လုပ်ဖို့လိုအပ်သမျှအမှောင်ထဲမှာဆေးသုတ်အတွက်အလင်းရောင်နဲ့ရွှေဖရုံသီးအင်္ကျီဖြစ်ပါတယ်။ မှောင်မိုက်ဆေးသုတ်အတွက်အလင်းရောင်မဆိုအနုပညာနှင့်လက်မှုပညာစတိုးကနေရယူနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျစိတ်ထားဆေးသုတ်ရဲ, မော်ဒယ်များအောင်အဘို့မှောင်မိုက် acrylic ဆေးသုတ်အတွက်အလင်းရောင်ကိုအသုံးပြုပါ, သို့မဟုတ်မှောင်မိုက်ထည်ဆေးသုတ်ထဲမှာတောက်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်းခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်ရေစိုခံဖြစ်သောရဲထည်ဆေးသုတ်, ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
သင့်ရဲ့ရွှေဖရုံသီး Paint ။
မီးထွက်လှည့်ဖြစ်လျှင်, ရွှေဖရုံသီးတစ်ဦးတောက်ပအလင်း Shine ။ ဖရုံသီးအဖြစ်တောက်ပသင်ချင်ပါတယ်အဖြစ်တောက်မပါဘူးဆိုရင်, အလင်းရောင်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအင်္ကျီအမှောင်ထဲမှာဆေးသုတ်အတွက်သက်ဆိုင်ပါသည်။
တစ်ဂျက်-O-Lantern မျက်နှာ Creating
ဤစီမံကိန်းအဘို့, jack ကို-o-မီးအိမ်မျက်နှာတောက်ပါဘူးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သင်တစ်ဦးထွင်းပေါက်-o-မီးအိမ်သုံးပြီးနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျပြီးသားမျက်နှာရရှိပါသည်။ သင်ရုံအမှောင်ထဲမှာဆေးသုတ်အတွက်အလင်းရောင်နှင့်အတူတစ်ဦးရဲရွှေဖရုံသီး, သငျသညျရိုးရိုးကုတ်အင်္ကျီဖရုံသီးချင်, သင်လက်စသတ်နေလျှင်။
ဘယ်လို Long ကအလင်းရောင်ကတော့ရွှေဖရုံသီး Glow လိမ့်မည်လော
အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသင်၏အဖရုံသီး Glow ကတောက်စေရန်အသုံးပြုသောဓာတုနှင့်သင်သည်သင်၏ရွှေဖရုံသီးကိုအားသွင်းဖို့အသုံးပြုတဲ့အလင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။
သွပ်ဆာလ်ဖိုက်မှရရှိပါသည်မှောင်မိုက်သုတ်ဆေးများတွင်အများဆုံးအလင်းရောင်အတွက်အသုံးပြုမယ့်င်း၏ Non-အဆိပ်သင့်ဓာတုပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကအပေါ်တစ်ဦးတောက်ပအလင်းထွန်းလင်းလျှင်, သင်ကတစ်နာရီအထိမိနစ်အနည်းငယ်အဘို့အတောက်ဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ သင်ဖရုံသီးပေါ်သို့တစ်ခုခရမ်းလွန်ဆီမီးခွက်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်အလင်းထွန်းလင်းပါကပိုပြီးတောက်ပတောက်ပေမယ့်ဖြစ်နိုင်မရှည်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကိုအသုံးပြုခဲ့လျှင် tritium -based ဆေးသုတ်, သင်သည်သင်၏ဖရုံသီးအလင်းရောင်စေနိုင်ရန်အတွက်အလင်းလျှောက်ထားရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, ပေါင်းဖရုံသီးအချိန်၏အဆုံးသည်အထိတော်တော်များများတောက်ပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လို Long ကအလင်းရောင်ကတော့ရွှေဖရုံသီးနောက်ဆုံးလိမ့်မည်လော
သင်အသုံးပြုဖရုံသီးအမျိုးအစားကိုသင့်ရဲ့ရဲဖရုံသီးမည်မျှကြာမြင့်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးထွင်းပေါက်-o-မီးအိမ်ပန်းချီလျှင်, ရွှေဖရုံသီးတစ်ပါတ်မှရက်အနည်းငယ်နောက်ဆုံးမှမျှော်လင့်ထား။ တစ်ဦး uncarved ဖရုံသီးလအနည်းငယ်ကြာရှည်စေနိုင်သည်။ တစ်ခုကအတုဖရုံသီးတစ်နှစ်အကြာတွင်တစ်နှစ်သုံးနိုင်တယ်။
တစ်သိပ္ပံတရားမျှတသောပိုစတာသို့မဟုတ် Display ကို Make
ဂယ်လီယမ် Spoon Tricks
လှံတံကို Stewart ကယ့်ထိပ်တန်းငါးခုအယ်လ်ဘန်
Shape: ဘုရားသခင်နှင့်ကောင်းကင်တမန် မှစ. မက်ဆေ့ခ်ျများ Dream
2015 အတွက်ထိပ်တန်း 10 ကျောင်းဆင်းပွဲသီချင်းများ
ရှိတ်စပီးယားရဲ့အဖွစျဆိုး မှစ. Juliet ရဲ့ Monologues
အန်သိုနီ Montgomery (Andre Maddox) | အထွေထွေဆေးရုံကြီးမင်းသား
ဘယ်လိုစကိတ်စီးကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်ရထား Build မှ
လုပ်ဆောင်စရာများနှင့် Don'ts ဝယ်ယူတုရုမြို့